काठमाडौंको बौद्धस्थित समता अस्पतालमा सरसफाइ गर्ने एकजना महिलाको रहस्यमय मृत्यु भएको छ । अस्पतालमा कार्यरत बिमला तमाङ नाम गरेकी २७ वर्षीय महिलाको लाश मंगलबार बिहान सलले घाँटी बाँधेर झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको थियो । तमाङ सोमबार बिहान ७
नेपालमा दुई दिने इन्डोभास्कुलर वर्कसप सम्पन्न भएको छ । वरिष्ठ न्युरो भास्कुलर सर्जन प्रा.डा. गोपाल रमण शर्माको नेतृत्वमा नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलामा उक्त वर्कसप गरिएको थियो । वर्कसपमा एन्युरिजम र एभिएम समस्यामा नसाबाट तार छिराएर क्वाइलिङ राख्ने उपचार
मुलु्कमा बायोमेडिकल ईन्जिनियरिङप्रति महिलाहरुको आकषर्ण बढ्दो छ । यसमा धेरै चुनौति छन् । सेवाका लागि दिनरात भन्न पाइँदैन । कुनै पनि समय तयार भएर बस्नुपर्छ । तापनि महिलाहरुले यो पेशालाई निकै आकर्षक रुपमा रुचाएको पाइन्छ । रञ्जु
भक्तपुरको दुधपाटीस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा नर्सहरुको आन्दोलन स्थगित भएको छ । आन्दोलनरत नर्स र केन्द्रबीच भएको १० बुँदे सहमतिसँगै गत वैशाखको पहिलो साताबाट आन्दोलित नर्सहरुले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । गत वैशाख २७
मिर्गौला रोग पीडितहरुले मृत्युपछि गरिने अंगदानलाई व्यापक बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । यसबाट डायलाईसिसबाट मुक्त भई प्रत्यारोपणका लागि अंग प्राप्त हुने उनीहरुले बताएका छन् । मिर्गौला पीडित सरोकार समाज नेपालको अगुवाइमा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र
नेपालमा बर्ड फ्लुका कारण पहिलो पटक एक जनाको ज्यान गएको आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ती व्यक्तिलाई बर्ड फ्लु सर्नुको कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान थालिएको बताएका छन्। मन्त्रालयको एपिडिमिओलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रवक्ता डाक्टर
भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा कर्मचारीहरुको स्थायी प्रक्रिया शुरु भएको छ । लोकसेवा आयोगमार्फत केन्द्रमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरुको स्थायी प्रक्रिया शुरु भएको हो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक एवं वरिष्ठ प्रत्यारोपणबिद् डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो—‘हामीले केन्द्रमा
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार, प्रति १० हजार जन्ममा १ जना हिमोफिलिया समस्या लिएर जन्मन्छन् । नेपालमा ३ हजार जति हिमोफिलियायुक्त व्यक्ति रहेको अनुमान छ । जनचेतनाको अभावका कारण सबै व्यक्ति सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन् । हिमोफिलिया सोसाइटी